Web Design | My Burmese Blog
Posts Tagged: Web Design	Smashing WordPress Book Review
On August 18, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Book, Review	S’pore ကနေ ရန်ကုန်ပြန်မလာ ရက်ပိုင်းအလိုလောက်ကပဲ Smashing Magazine ရဲ့ book series Smashing WordPress ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို Funan Digital Mall ကနေ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Funan ရဲ့ လေးထပ်က စာအုပ်ဆိုင်မှာ ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်က Wiley ထုတ်ပါ။ ဒီစာအုပ်က အွန်လိုင်းကနေမှာမှ ရတဲ့ စာအုပ်ပေမယ့် အဲဒီ Funan က ဆိုင်မှာ ရောက်နေတာကလဲ နောက်ခံ ဇာတ်လမ်းရှိပါသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းမပြောခင် ကြိုပြောရပါဦးမယ် အခုရေးမယ့် ပို့စ်က Smashing WordPress Book Review ဖြစ်ပါတယ်။ Smashing WordPress ဆိုတာ Popular ဖြစ်တဲ့ Web Design Blog Smashing Magazine ကထုတ်တဲ့ စာအုပ်ပါ။
Book, Review, Web Design	Continue Reading
Simple CSS Trick for Large Background
On December 17, 2009	by Htoo Tay Zar	With	5 Comments	- Uncategorized	ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ကို တိုက်ရိုက်မ၀င်ဘဲ htootayzar.com ကနေ ၀င်တဲ့အခါ front page တစ်ခုကို အားလုံးမြင်ဘူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီ page က ဒိုမိန်းဝယ်ကတည်းက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ထည့်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်က ဆိုဒ်ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ ဘလော့ဂ်တက်လာတာမျိုးထက် အခြား ဆိုဒ်တစ်ခုလိုဖြစ်ချင်တာနောက် လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အလုပ်တွေလဲ ထည့်ချင်သေးတာ နောက် page rank အတွက်လဲ စဉ်းစားပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲ index ကိုချန်ထားခဲ့တာပါ။ ပြင်မယ် ပြင်မယ်နဲ့ မအားတာရယ် လုပ်ရင်လဲ အပြည့်အစုံဖြစ်မှ တင်ချင်တာနဲ့ အခု နှစ်ချီကြာနေပြီ မပြင်ဖြစ်သေးတာပါ။ ဒီနေ့ကတော့ အဲဒီ front page ကို ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာ trick တချို့ ရေးမလို့ပါ။
CSS, Web Design	Continue Reading
Interview with Nick La from WDW
On December 6, 2008	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Intresting News	မနေ့က Nick La နဲ့ interview လုပ်ထားတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုတွေ့လို့ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ Nick La ဆိုသူကတော့ Web Designer Wall, N Design Studio, Best Web Gallery တိ်ု့ရဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းနာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဘလော့ဂ်တွေမှာ web design, web trends, illustrator စတဲ့ ဒီဇိုင်း အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နောက် Best Web Gallery မှာတော့ အခြား css ဆိုဒ်တွေရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Interview, Intresting News, Web Design	Continue Reading
Recommended Article for Web Designers
On August 17, 2008	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Intresting News	ဒီနေ့ feed တွေဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ဖတ်ဖြစ်လို့ ဒီမှာ ပြန်ပြီးပို့စ်တင်လိုက်တာပါ.. Kai Loon blog မှာ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ personal အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ.. သူက ဒီအကြောင်းကို မနေ့က twitter မှာ twitt လုပ်ထားတာတွေ့လို့ ကျွန်တော်တောင် reply လုပ်လိုက်သေးတယ် အကြောင်းအရာက က သူ့သူငယ်ချင်းက အလုပ်အပ်လို့ ဒီဇိုင်းဆွဲပေးတယ် layout ၇တော့ ပြတော့ ဟိုက HTML, CSS စတဲ့ဖိုင်တွေတောင်းပြီး နောက်ဆုံး မလုပ်ဖြစ်တော့ရာကနေ သူသွားကြည့်တော့ အဲဒီဆိုဒ်မှာ သူ့ရဲ့ layout သုံးထားတဲ့ ကိစ္စပါ. Layout ဆိုတာမျိုးကလည်း တကယ်တော့ art လို့ ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ် အိုင်ဒီယာ အရောင် ဒီဇိုင်း resolution တွေက တကယ်တော့ mark up ထပ်ပိုပြီး စဉ်းစားရတဲ့ အရာမျိုးပါပဲ. ဒီလိုမျိုး အဖြစ်တွေကတော့ လူတွေအားလုံးမှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် သူများကို လေးစားတတ်တဲ့စိတ်မရှိရင် ထပ်ဖြစ်နေမှာပဲ. ရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါပဲ ကိုယ်လည်းနောင် ကြုံရတဲ့ အခါ ခွင့်လွှတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်.
Read Article @ Kai Loon
Web Design	Recent Posts